Manchester United oo xod-xodaneysa xidig 16 jir ah oo u dhashay Dalka Brazil. - Caasimada Online
Home Warar Manchester United oo xod-xodaneysa xidig 16 jir ah oo u dhashay Dalka...
Manchester United oo xod-xodaneysa xidig 16 jir ah oo u dhashay Dalka Brazil.
Manchester United ayaa casuumtay 16 jirka weerarka uga ciyaara kooxda Desportivo Brasil Bruno Gomes, iyadoo aabihiisna uu safarka ku wehliyey.
Gomes ayaa tababar la qaatay kooxda inteeda kale laakiin wuxuu doonayey inay marti geliyaan koox ka dhisan Yurub.
Wuxuu dareenkiisa uga waramay tababaraha kooxda United Sir Alex Ferguson.
“Rajadeydu waa inaan noqdaa gool dhaliyaha ugu sareeya Yurub, anigoo midaas markii horaba kasoo bilaabay Brazil, halka aan sidoo kale doonaya inaan Noqdo Horyaalka England aana doonayo inaan ku guuleysto the Champions League,” ayuu yiri da’yarkaani.
“[Ferguson] waa halyeey Mancheter ah, qof walba wuxuu doonayaa inuu la mid noqdo ama uu ku dhowaado. Xaqiiqdii, keliya wuxuu I weydiiyey booska aan ka ciyaaro markii aan kula hadlay Ingiriis–na wuxuu la hadlay wakiilka kooxda kaasoo isoo waday Manchester.
Gomes ayaa akoonkiisa Twitter ku daabacay isagoo xiran maaliayada Manchester United.